Sysomos Gaze: Nlekota onyonyo na vidiyo maka Social Media | Martech Zone
You're bụ akara mba na ndị ahịa arụrụala na-ekenye foto ihere nke ika gị na mgbasa ozi mmekọrịta. Ha anaghị akpado gị na foto ahụ, mana ọ dịkwa mma ịghara ịkekọrịta. Ọ na-amalite ịrịa ma tupu ị mara ya, ihe nlekota nlekota gị na-apụ ka saịtị ndị na-eduga ịmalite ịkpọtụrụ gị ma kesaa onyonyo ahụ n'ịntanetị.
Oge ewerela oge na oge dị mkpa, mana ị ga-egbu oge. You're nọ n'ọnọdụ nchekwa. Make na-ekwu okwu, jiri obi umeala rịọ mgbaghara, ma gbalịsie ike ime ka ndị ahịa nweta ya.
Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọzọ? Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere ọrụ mata ihe ngosi gị na foto ahụ ma gwa gị oge nke ihe ahụ merenụ? N'ime obere netwọkụ hụrụ foto ahụ, ha hụrụ nzaghachi gị na obere ụlọ. Ikekwe ị na-eseghachi foto ya mgbaghara na ịkwụghachi ụgwọ. Ọ bụ ezie na ọ kwụsịghị ihe onyonyo ka ọ ghara ịrịa, onye ọ bụla nke kpebiri ide banyere mbibi ahụ na-ekwupụta nzaghachi gị.
Kama ị dị ka ụdị egwu na-adịghị emetụ n'ahụ, ugbu a ị dị ka ika na-ege ndị ahịa gị ntị. Nke a bụ uru dị n'azụ Sysomos Gaze (na mbụ Usoro Gazemetrics) - na-enye onyonyo na nlekota vidiyo maka mgbasa ozi mmekọrịta, nchịkọta, njikwa mkpọsa na ịkọ akụkọ.
Ijikwa akara dị mma chọrọ ọ bụghị naanị ịmara onye na-ekwu maka akara gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị - kamakwa ihe ngosi ọhụụ ha na -ekere ma na-ahụ. Sysomos Gaze na-achọta onyonyo nke akara gị gafee ọwa mmekọrịta ma na-achịkọta ha n'otu ebe.
Sysomos Gaze Ọ bara uru maka njikwa ikike dijitalụ, na-enye ohere ka ndị ọrụ nwee ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ gosipụtara foto. Dị nwere ike ịrịọ maka ikikere iji degharịa ihe onyonyo ndị ọrụ na ọwa ha, na-atụgharị ọdịnaya ahụ na akụ na-arụ ọrụ maka akara ahụ.
I nwekwara ike inyocha onyonyo na vidiyo kwuru oge na Sysomos Gaze Analytics.
Sysomos bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke sayensị data na-akwado nke na-enye azụmaahịa ozigbo ọnọdụ na ọtụtụ narị nde mkparịta ụka na-eme n'ịntanetị kwa ụbọchị. Sysomos social spy platform na-ekwupụta mkparịta ụka ndị a na akụkọ akụkọ iji nye ndị ahịa ezigbo azịza gbasara ihe ndị ahịa ha na-eche ma na-eche.
Chọọ na curate ezigbo gwọọ ndị ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya na vidiyo sitere na ndị ahịa n'otu ele.
Wepụta nkwenye arịrịọ arụmọrụ na-enyere ndị ahịa aka ịchịkọta ikike ndị na-azụ ahịa n'ụzọ dị mfe iji jiri onyonyo na vidiyo ha mee mkpọsa ahịa ha
Lookalike ọdịnaya na-ewu ihe na Smartlists: Ndị na-ere ahịa nwere ike iwulite nchịkọta nke onyonyo dabere na ihe ndị a na-ahụ anya site na ịhọrọ usoro ihe oyiyi na ihe ndị ahịa ahụ na-achọ iji nyochaa ma ọ bụ idozi.
Nyochaa na itinye aka ya na Instagram na Twitter influencers, na-enwetakwu nghọta banyere àgwà ha pụrụ iche, mmekọrịta na omume ha
Ihe karịrị ụdị 1500 na ụlọ ọrụ, gụnyere pasent 80 nke ụdị ahịa zuru ụwa ọnụ kachasị baa uru, dịka Interbrand họọrọ, tụkwasịrị Sysomos obi ike maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Sysomos nwere ọfịs na obodo asaa n'ụwa niile, gụnyere London, New York, San Francisco na Toronto.
Tags: njirimara njirimaranlekota oruakwụkwọ gazemetricsihe ngosi ihe oyiyinlekota onyonyonjirimara njirimaranlekota oru mgbasa ozisysomossysomos na-ele anyaihe ngosi vidiyonlekota oru vidiyo